Proxy-software | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Proxy-software. Show all posts
ChrisPC Anonymous Proxy Pro 5.80 Multilingual
ChrisPC Anonymous Proxy Pro 5.80 Multilingual | 3.41 MB
Home Page: http://proxy.chris-pc.com
ကဏ္ဍ PC-Software, Proxy-software
Super Hide IP 3.4.3.6 Free Softwares Download
2014 အတွက် အလကား ရ တဲ့ ထိပ်တန်း poxy links ( 100 )
ကျော်ခွချင်တဲ့ ကျ နော့် မိတ်ဆွေတွေ အတွက်ပါ။ အလကား ရတဲ့ poxy sites ပေါင်း (100) တိတိ ပါ။
ပိတ်ထားတဲ့ website တွေ ကို ဝင်ရောက် ကြဖို့ အသုံးပြု နိုင်ကြပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 29, 2014 No comments:
ChrisPC Anonymous Proxy Pro 5.50 Latest Version Free Download
CCProxy 8.0 Build 20140830 Multilingual Full Version
CCProxy 8.0 Build 20140830 Multilingual | 1.92 MB
Home Page - www.youngzsoft.net
▼ ultrafile.me ▼
ကဏ္ဍ Internet, network, Proxy-software
ကျော် ခွ ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ အတွက် ပါ။ အလကား ရတဲ့ poxy sites ပေါင်း ( 100) တိတိ ပါ။ ပိတ်ထားတဲ့ website တွေ ကို ဝင်ရောက် နိုင် ကြဖို့ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
From: စိုင်းသူ - (နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း)
ကဏ္ဍ Proxy-software, လမ်းညွှန်
Proxy အသုံးပြု နေသူ များ အတွက် Xproxy
အ ကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် Proxy တွေ အသုံးပြု နေရတဲ့ မိတ်ဆွေ များ အတွက် အမြဲတမ်း Update ဖြစ်နေ စေ တဲ့ Proxy ဆော့ဝဲ လေး ကို တင် ပေး လိုက် ပါတယ်။
Know that your IP address is exposed every time you visitawebsite? Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private information.
Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location to their home, the IP address is our passport of identity are on the Internet.
Each time we access any web page on the left page server that storesasmall footprint of our presence.
- X-Proxy is FREE and allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and prevents intrusion from hackers.
- With X-Proxy can prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet.
- X-Proxy change your IP with the click ofabutton!
When connected to the Internet your computer is assigned an IP address of your Internet service provider (ISP) ..A IP address isaunique identification number.
It is used to identify all computers and websites on the Internet, and could be used to track communications with all websites or any program that connect to the Internet.
This is known as direct Internet connection. When X-Proxy running on your computer, you can connect toaVPN or proxy server that acts as an intermediary betweenahome network, the rest of the Internet and makes requests for information using its own IP address instead of yours.
Choose the country you want IP
Do not waste time checking proxies servers. Simply select the IP address to use in the list.
Every IP address you see is usable.
X-Proxy works with Internet Explorer , Google Chrome , Mozilla FireFox , with most IM clients, games and web-based (eg Gmail, Hotmail)!
All websites visited or E-mails sent using these browsers will show you are connecting fromafalse IP.
I banned from the Forums, Blogs, Etc ...?
He has been banned fromaforum or blog etc ...? No problem! Use X-Proxy to change your IP allowing you to access any website.
- A modern and accessible interface.
- Updated version and code automatically.
- Updates and verifies proxy list automatically.
- Available in4languages ​​Spanish, English, Portuguese and French.
- More than 30 skins (skins) are available.
- Find country by IP address.
- Find IP domain name.
- Makes ping an IP or host name.
- Removes the history from Internet Explorer, Google Chrome and Mozilla Firefox.
- Internet Speed ​​Test.
- Information of anonymity.
- Servers Proxies and VPN servers.
- Blocks all types of ads, malicious websites, browser hijackers, etc ....
saucessoftware direct link
Hotspot shield download or vpn download or proxy download isaproxy tool which is used when don't know how to open You tube in restricted countries.
Latest Hotspot shield isaproxy software which is used as VPN to open restricted sites.
Hotspot Shield Full Version Download is used to encrypts your internet connection and traffic.
Free Download Hotspot Shield keeps you safe from all kind of spying and ip grabing activities.Hotspot Shield For PC Free Download has advanced functions which keep safe your ip address.Hotspot Shield For Mobile Free Download is going to updated by Danisoftwarez which includes serial keys also.
open its setup and install it
connect and after it got button will turn green
ကဏ္ဍ Connection, Internet, Proxy-software
Jordy Proxy Changer 1.05 + Keygen
Proxy Changer အသုံးပြု သူတွေ အတွက် အလွယ် ကူဆုံး Final Full ဆော့စ်ဝဲလေးဖြစ်တဲ့ Jordy Proxy Changer လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။bans and blocks လုပ်ခံထားရလို့ forums ဆိုဒ်တွေထဲ ၀င်မရ
သူများနှင့် rapidshare, hotfile, fileserve အစရှိတဲ့ download sites တွေကို ၀င်ရောက်ဖို့အတွက် Auto
matic proxy server ကို switching လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုပြီး မိမိကြိုက်တဲ့နိုင်ငံ ကို select လုပ်ပြီး proxy checks လုပ်ပေးရုံပါပဲ။
၀င်းဒိုး အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့ ဖိုင်ထဲမှာ Keygen ကို ထည့် သွင်း
Hides your IP address in order to keep your privacy safe.
Removes bans and blocks on forums, classifields and download sites (rapidshare, hotfile, fileserve etc.)
Works with all Browsers and all system configurations.
Has proxy management control that automatically downloads proxy, checks them and select the best for you.
OS : Win 2000, Win XP, Win XP x64, Win Server 2003, Vista, Vista x64, Win Server 2008, Win Server 2008 x64, Win 7, Win7x64
Proxy တွေကို Auto ချိန်းပေးမဲ့ Jordy Proxy Changer 1.05
ဒီ Software လေးကတော့ အရမ်း အသုံးဝင် ပါတယ်.... ပိတ်ထားတဲ့ Website တွေကို ဝင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
မိမိ IP ကို မသိစေချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...။
This software includesaproxy management tool that allows you to find the best and reliable proxies so you can enjoy the best anonymously internet experience.
- Hides your IP address in order to keep your privacy safe.
- Removes bans and blocks on forums, classifields and download sites (rapidshare, hotfile, fileserve etc.)
- Works with all Browsers and all system configurations.
- Has proxy management control that automatically downloads proxy, checks them and select the best for you.
Free Proxy Updates (23/4/2014)
Proxy Updates လေးကို ကူးယူ မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ်။
အရင်ကလည်း တင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်၊ နောင်ကိုလည်း အဆင်ပြေသလို တင်ပေးပါအုန်းမယ်။
လိုအပ်သူများ အောက်မှာ ကူးယူသွားနိုင်ပါတယ်။
Proxy Updates April, 18, 2014
Free Proxy Updates (12/4/2014)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 12, 2014 No comments:
Free Proxy Updates (10/ 4/ 2014)
Min Soe Yar Sar ဆိုဒ်မှ Proxy Updates လေးကို ကူးယူမျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, April 10, 2014 No comments:
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် ကို မြှင့်တင် ပေးမယ့် Data Compression Proxy
Chrome က Android, iOS Apps တွေမှာ ဒေတာ တွေကို ချုံ့ပေးတဲ့ နည်း ပညာကို အသုံး ပြု ပါတယ်။ အဲဒီ
အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ Chrome Browser ကို အသုံးပြုပြီး ၀က်ဆိုက်တွေ ကြည့်ရင် လျှင်မြန်စေပါတယ်။
ဒေတာ ပမာဏနဲ့ အသုံးပြု ရတဲ့ သူတွေ အတွက် အကုန်အကျ သက်သာစေ ပါတယ်။ အဲဒီလို ဒေတာ တွေ
ကို ချုံ့ပေးတဲ့နည်း ကို Desktop မှာ အသုံးပြုချင်ရင် Chrome Extension တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data Compression
Proxy ကို အသုံး ပြုနိုင်ပါတယ်။
Extension ကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင် ဘရောက်စာမှာ အိုင်ကွန် အစိမ်းရောင်ကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါက
Data Compressioin Proxy ကို On ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Off လုပ်ချင် ရင် အိုင်ကွန် ကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးရ
ပါမယ်။ အနီရောင်ပြောင်း သွားရင် Off ဖြစ်သွားပါပြီ။
Data Compression Proxy က သင့်ရဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် ကို Google Servers တွေကနေ ဖြတ်သန်း
စေမှာ ဖြစ်ပြီး ဒေတာ တွေကို ချုံ့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ISP က ပိတ် ထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေ ကိုတောင် ကျော်ကြည့်လို့ ရတယ်လို့ တစ်ချို့ကပြော ပါတယ်။ Data
Compression Proxy ကို အောက်က လင့် ကနေ အင်စတော လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Extension က လျှော့ချပေး ထားတဲ့ ဒေတာ ပမာဏ ကို သိချင်ရင် chrome://net-inter nals/#bandwidth
ကို ဘရောက်စာ Address Bar ကနေရိုက်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Ref: DIGITAL LIFE ဂျာနယ်
ကဏ္ဍ Android, Google, iOS, Proxy-software
Squid Proxy ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ခြင်း
Proxy ဆိုတာ client နှင့် Server ရဲ့ ကြားမှာ ကြားခံ ဆောင်ရွက် ပေးတဲ့ အရာပါ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က
www.google.com လို့ Browser ကနေ ဝင်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ကြား ထဲမယ် proxy ရှိမယ် ဆို ရင် goo
gle.com အထိ သွားစရာ မလိုပဲ သူ့ထဲ မှာရှိတဲ့ အတိုင်း တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးလိုက် ပါတယ် မိမိရဲ့ ip address ကို web server တွေက မသိအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့ နေရာမှာလည်း သုံးပါတယ်။
Proxy တွေက အမျိုး အစား အလိုက်လည်း ကွဲသေးတာကို Transparent proxy, An-onymous အစရှိ
သဖြင့်ပေ့ါ ကျနော်လည်း အဲ့လောက်ပဲ ရမ်းတုတ်နိုင်တယ် ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် တက်နေတဲ့ သူမှ မ
ကဲကျနော်တို့ တစ်ခု စဉ်းစားကြည့်ရအောင်
ကိုယ်နဲ့ နီးနီး နားနား proxy ကိုသုံးမယ် ပြီးရင် ကိုယ် အသုံးများတဲ့ ဆိုဒ်တွေက proxy မှာ cache တွေ
ရှိရင် proxy ကလည်း update ဖြစ်ရင် အဲ့ကနေ တစ်ခါတည်း ယူရင် ဟန် မကျ ဘူးလား အင်တာ နက်
ဆိုင်တွေ ကတော့ အခုလို ဆိုင် တွင်း မှာ proxy သုံးရင် user တစ်ယောက် ချင်းဆီ အတွက် အသုံးပြု
မယ် data usage လည်း နည်း မသွားနိုင်ဘူးလား တစ်ယောက်ကလည်း ဒီဆိုဒ်ကို ကြည့် နောက်တစ်
ယောက်ကလည်း ဒီဆိုဒ်ကို ကြည့် ပြန်ပြီး ဒေါင်းနေ ရရင် မပင်းပန်းဘူးလား အဲ့အတွက် proxy သုံးရင်
cache ဖိုင်ကနေ တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ကျနော် ရမ်းတုတ် တာ နည်းနည်း များသွားပြီ ဆိုတော့ အခု ရေးမယ့် အကြောင်းအရာကို ဆက်ပါ
မယ် ကွန်ပြူတာ ထဲမှပဲ ကိုယ် proxy ထားမယ် cache ဖိုင်တွေ ထားမယ် ကိုယ် ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကြည့်
မယ့် ဆိုဒ်တွေဆို ကိုယ့် စက်မှာ cache ဖိုင်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မြန် ဝင်ရောက်နိုင်မယ် ဘယ်
ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ ဆိုတာ ဆက်ဖတ်ပေး ပါဦး နည်းနည်း ရှုပ်တယ် ထင်ရင် သေချာ တစ်ဆင့် ချင်း
လုပ်ပါ မခက် ပါဘူး အဆင့် (၅) ဆင့်ခွဲထားပါတယ်။
နံပတ် လေးး အချက်ကို စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြီးတော့ အသုံးပြု သူတွေ အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်
ပုံမှန်ကတော့ ကျော်ခဲ့ လိုက်ပါ ကျနော်လည်း ဒီအတိုင်း သုံးနေတာပါ။
အဆင့်တစ်ခုနေနဲ့ ရေးရလောက်အောင် ဘာမှ မရှိပါဘူး အောက်က လင့်မှာ သွား ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဒေါင်းပြီးလို့ရလာတဲ့ Zip File ထဲက Squid ဆိုတဲ့ Folder ကို C:ထဲကိုကော်ပီကူးထည့်လိုက်ပါ
.default ဆိုတာလေးကို ဖျက်လိုက်ပေ့ါဗျာ R-Click=>Rename ရှင်းပါတယ်နော်
မှတ်ချက်။ ။ .default ဆိုတဲ့ extension ကိုမမြင် ရဘူးဆိုရင် Window7မှာဆိုရင် folder
Option view=>show extension ကနေပြန်ပြီးတော့ ဖော်လို့ရပါတယ် (အတိအကျရှိ
ချင်မှရှိပါမယ် ကျတော်အခု window 8 နဲ့အသားကျတာကြာပြီဆိုတော့) Window 8 အ
Win+R=>inetcpl.cpl ရိုက်ပြီးတော့ internet option ကိုဝင်လိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာ တစ် ခုမေးစရာ ရှိတယ် တခြား ဆိုဒ်တွေ ဝင်လို့ရင် facebook ကောဝင်လို့ မရ
ဘူးလားဆိုတာကို မရပါဘူးခင်ဗျာ Facebook အတွက် ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လို
အပ်ပါတယ် ဘယ်လိုပြင်ရမှာလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ
C:\_squid\_etc ကိုသွားလိုက်ပါ squid.conf ကို notepad နှင့်ဖွင့်လိုက်ပါ notepad
Win+R=>notepad ဆိုNပီး notpad ဖွင့်Nပီးတော့ notepad ထဲ့ကို Drag ဆွဲထည့်
Notepad နှင့် ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Ctrl+F ကိုနိတ်ပါ
http_access deny all ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါ
Win+R=>cmd ပေ့ါဗျာ window7ဆိုရင် run box ကရပါတယ် window 8 ဆိုရင်
win+X ကိုနိတ်ပါ command prompt(admin) ကိုနိတ်ဝင်ပါ အောက်မှာ ကျနော် ပြ
ထားတဲ့ စာကြောင်းသုံးကြောင်းကို တစ်ကြောင်းချင်းစီရိုက်ပြီးတော့ Enter ခေါက်သွားပါ
Failed ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ် ကျနော့်မှာ ရှိပြီးသားမို့ပါ ရဲရဲသာ ရိုက်သွား ဘာမှမမှားဘူး
စိတ်ချ ကိုယ်ရပြီဆိုမှ ကျတော်တင်ပေးတာ
အပေါ်က အဆင့်တွေအကုန်လုံးပြီးပြီထင်ပါတယ် ဒီတစ်ဆင့်ပြီးရင် သုံးလို့ရပါပြီ
ဘာဖြစ်လို့ဒီအဆင့်ကို ထည့်သွင်းထားတာလဲဆိုတော့ Suqid Service က internet
ချိတ်ထားတယ် လိုင်းနည်းနည်းရှိရင် အလိုလိုနေရင် စတင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သုံးလို
့မရအောင် ကျသွားးရင်တော့ လိုင်းတက် လာရင်တောင် သူကိုပြန်စောင့်နေ ရတာအ
လုပ်တစ်ခုပါ အခု အဆင့်ကို လုပ်လိုက်ရင် ဘာမှစောင့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး တစ်ခါစ
ထားရင်း လိုင်ရှိရှိ မရှိရှိပွင့်နေပြီး သားပါ ကျနော့်အတွက်တော့လုံးဝအဆင်ပြေသွားပါ
Win+R=>services.msc ကိုရိုက်ပြီးတော့ Service ကိုဝင်လိုက်ပါ
Squid ဆိုတဲ့ Service ကိုရှာလိုက်ပါ S ကိုနိတ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ နည်းနည်းတော့
Nပီးရင်တော့ Double Click နိတ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ
squid service ကိုစတာကတော့ အင်တာနက်ချိတ်ထားရင် အလိုလို စပါတယ် မစသေးရင်
တော့win+R=>cmd=>net start squid ဆိုပြီး စရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော် အောက်မှာ
ပုံပြထားသလို start ကိုနိတ်ပြီးတော့စ နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ လုံးဝသုံးလို့ရပါပြီ chrome,firefox,internet explorer ကြိုက်တဲ့ Browser
ကိုဖွင့်ပြီးသုံးလို့ရပါပြီ cache ဖိုင်တွေ များလာတာနှင့် အမျှ Data Usage ကသက်သာလာ
ပါလိမ့်မယ် မလို့အပ်တဲ့ Data တွေကို Cache ကနေပဲ ယူလိုက်တာမို့ လိုင်းလည်းမြန်လာ
by Myanmar IT Helper
ကဏ္ဍ Internet, Proxy-software, နည်းပညာ